AIC Madagascar - Wie wir arbeiten
MANAO AHOANA NY FIASANAY :
Mihaino, manaiky ary ny fandraisana anjara
Manaiky sy manangana fifandraisana
Ireo mpaolon-tena an-tsitra-pon’ny AIC dia mihaino an’ireo olona tena marefo sy manampy azy ireo mba handray anjara anatin’ireo tetik’asa izay hitondra fivoharana amin’ny fiainandreo.
Ny asanay dia mifantoka tanteraka amin’ny fahalàlana marina ireo olona mpahazo tombontsoa izay tena mifanerasera akaiky aminay isan’andro.
Irak’i MD Vincent de Paul – AIC Madasikara dia naorin’ireo mpilatsaka an-tsitra- po 5 miara –miasa tamin’ireo masera mpihantra olona teto Manakara ( Diosezin’ny Farafangana) tamin’ny taona 1988 . Ny tanjona tiandreo ahatongavana dia ny ahitana valiny amin’ny antony mahatonga ny fiakaran’ny isan’ireo ankizy mirenireny eny an-dalam-be ary koa hanomboana ny zavatra efa niarà – nanapaka ao anatin’ny fehin-kevitra ara-panahin’ireo masera mpihantra olona izay niangavy anay mba hiasa ho an’ireo tena mahantra indrindra ara-materialy, ara-pitondran-tena ary ara-panahy.
Ankehitriny izahay dia mihoatran’ny 150 mpilatsaka an-tsitra-po nalamina ao anatin’ny vondrona 15 ( jereo ny sary ) izay mamaly ny filan’ire olona miisa 6000 miferinaina ao anatin’ny fahantrana, ny ankabeazan’izany dia ireo vehivavy sy ny ankizy.
Satria ny kolontsaina Malagasy ohatrin’ny mifanaraka amin’ny kolontsainanay, izahay dia nahatsapa nifandray amin’ny olombelona manan’aina rehetra amin’ny maha olona tsirairay ao anatin’ny fianakavian’Andriamanitra iray sy mitovy.